Vaovao - HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD dia namolavola ny firakotra antioxidant teknolojia vaovao ary nandresy tamin'ny okt.
Ny haitao fanosotra antioxidant ho an'ny electrode grafita, dia ampiasaina amin'ny electrode grafite an'ny fanaovan-jiro vita amin'ny lafaoro elektrika. dia avy amin'ny epoxy novolac, acetal ofisialy polyvinyl, asidra phosorika, karbôna silika, silicon-dioxide, fitambarana toy ny oksida aluminium, ferida oksida, boron nitride, norbide. coating voalohany amin'ny electrode ambonin'ny ambanin'ny electrode dop, manana fahefatra ny adhesive, mahery ny oxidation-resist, mampihatra tombony mora foana, mampiasa fanjifana electrode grafit mba hampihenana 0.8-1.0kg amin'ny taonina 7-8kg vy an'ny tany am-boalohany fototra fanadiovana.0933a aorian'ny fizotran'ny alim-pandrefesana elektrônita elektrônôra vaovao firakotra vaovao - elektroda grafito nanitatra fotoana fampiasana 26 ~ 70.4%.
Ao anatin'ny dingan'ny fampiasana electrode grafite ho an'ny fatana arina elektrika rehefa mamokatra vy, noho ny tontolon'ny fihanaky ny hafanana avo lenta, ny fitrandrahana ny ilan'ny elektrôtra dia manodidina ny 60% amin'ny totalin'ny fanjifana. Antioxidants electrode electrite ao anatin'ny 600 ~ 1800 ℃, dia afaka misoroka ny fifandraisan'ny elektroda amin'ny rivotra mivantana mba hampihenana ny fitrandrahana elektrônaly grafit ary hanalava ny androm-piainan'ny elektroda.
Ny vokatra impregnated dia azo ampiasaina miaraka amin'ny vokatra manarona, ary ny anti-oxidation dia azo hatsaraina. ny fitrandrahana azo tanterahina ambany oksidana ambanin'ny mari-pana avoakan'ny vokatra karbaona, ampifandraiso amin'ny electrode grafite izay ampiasain'ny vy lafaoro misy lafaoro elektrika, milalao ny valin'ny fiarovana anti-oksidasiana grafit electrode anti-oxidation fitsaboana toy ny endrika eto ambany:
FIKAMBANANA CONSUMPTION ELECTRODE (%)
NAOTY: ny data dia ny valin'ny fitsapana anti-oksidasiôna elektrônaly grafita tamin'ny 4 septambra 2017 avy amin'ny vondrona vy sy vy vy.
Ny fihenan'ny fanjifana herinaratra dia isaina araka ny valin'ny fanandramana fikosoham-bary vy.